Lawula izimvo zakho kwindawo engcono | Iindaba zeGajethi
En blogosphere Los blogs zizinto ezisisiseko (iiyunithi zazo ezisisiseko), i amakhonkco Yenza umxube we-binder obabophelelayo kunye izimvo Zizinto zokuzonwabisa ezinika ubomi kolu lwakhiwo luphela.
Pukwenzela mna, ibhlog ngaphandle kwezimvo ifana nencwadi, ungayifunda kwaye ufumane ulwazi olusebenzayo kuyo, kodwa awunakho ukukhetha ukunxibelelana nombhali wayo kwaye wabelane ngokuthe ngqo ngezimvo zakho naye. Ngelixa ufunda incwadi inokubuyela ebomini, kodwa akufuneki ulibale ukuba ibuyela kubomi obudlulileyo. Ubomi bakhe bobomzuzu umbhali wayo egqibile ukubhala hayi ngalo mzuzu uyifunda. Kwibhlog ngaphandle kwezimvo, izithuba zibonisa izimvo ezingagungqiyo, ezihlaziywa kuphela ngumsebenzi kunye nobabalo lwebhlog evuyayo ukwenza umsebenzi wokuhlaziya.
ÉOku akwenzeki kwi Iiblogi ezinezimvo, kuzo kunokwenzeka ukugcina ulwazi luphilile, ukuveza izimvo ezahlukeneyo, ukuxoxa, ukuvumelana kunye nokuxhasa uluvo lombhali wayo, ngegama "ukuthetha".
Endinguye Ndicela izimvo, Ngaphandle kwabo ibhlogosphere yayiya kuba lelinye ithala leencwadi, kodwa gcinani engqondweni ukuba ayinakulinganisa isicwangciso sakho sokubeka. Ukuba ukulungiswa kweinjini yokukhangela akuthethi nto kuwe, le nto ndiza kukuxelela yona ayiyi kuba nomdla kuwe. Ukuba unexhala lokufumana abaphulaphuli kunye nokuphucula indlela obeka ngayo, ezinye zezi zinokukunceda iingcebiso.
Lawula uxinano lwegama elingundoqo: Ukuba ufuna ukubeka kukhangelo oluthile kufuneka ulawule uxinano lwamagama athile aphambili. Njengoko ufumana izimvo, uxinano lokuqala luya kuphela kwaye wonke umsebenzi ngaphambi kokupapasha isithuba uza kuqala ungabinamsebenzi. Akunakwenzeka ukuba ulawule oko kubhalwa ngumntu kumagqabaza, kwaye akukho mntu uzenza ngathi uyakwenza oku. Kodwa ewe ungalawula into oyibhalayo kwingcaciso. Ukuba ubona ukuba akukho mntu usebenzisa amagama akho aphambili xa beshiya uluvo (kuyakwenzeka kuma-99% amatyala), sebenzisa xa uphendula. Ngale ndlela unokugcina uxinano lokuqala lwesithuba.
Yandisa uxinano lwegama elingundoqo: Ukuba unomdla wokwenza izithuba ezimfutshane, uya kuba neengxaki zokongeza amagama angundoqo. Kwisithuba esifutshane awukwazi ukuphinda amaxesha ali-100 (ukusho inani, oko akuthethi nto) igama eliphambili. Ukuba wenze njalo, isicatshulwa sinokutsala kuphela kwiinjini zokukhangela, umntu ofundayo uya kubaleka kule ndawo, kwaye kunokwenzeka ukuba iinjini zokukhangela azikuthandi kwaye zikubhale njengogaxekile. Isisombululo sigqityiwe yenza isithuba esixineneyo phakathi kwamagama aphambili (ayiligcwalisi inqaku lakho) emva koko yandisa oku kuxinana ngokulawula izimvo ozenzayo xa uphendula kwezinye izimvo. Eli nqaku liza kukhululeka xa lifundwa kwaye nangona kunjalo uxinano ngokubanzi luya kulawulwa.
Yongeza imitya yokukhangela: Masisebenzise ukuqiqa ngokufanayo ngasentla. Awunakho ukugcwalisa inqaku elinamawaka emitya yokukhangela, kodwa ungongeza imitya emitsha kwizimvo zakho. Obu buchule buluncedo ngakumbi xa uza kufumana umtya omtsha wophando ongakhange ucinge ngawo ngaphambi kokuthumela inqaku. Ukuba ujonga izibalo zakho kwaye ufumane umtya ophindaphindiweyo Okuthumela ukuba undwendwele kufuneka ujonge ukuba ubonakala kwesiphi isikhundla kwiphepha leziphumo zeinjini yokukhangela yolo khonkco. Ukuba awuhlali kwindawo yokuqala ungawomeleza loo mxokelelwano ngokuwongeza kumagqabaza akho kwaye uyakubona ukuba utyelelo lwakho lonyuka njani ngokudityaniswa kwamagama. Ukuba ungowokuqala ungazama ukomeleza isikhundla sakho, kodwa kuya kufuneka ulumke ungangeni kwi ulungiselelo olugqithisileyo. Ukuba uyabaxa kwaye udlula kwi-spammer uya kuwuphosa wonke umsebenzi wokumisa owenziwe.
Xa ucinga ukuba yonke into iyathethwa ngesihloko, vala amagqabantshintshi: Kumanqaku ajongene neencwadana zemigaqo, iityhuthoriyali, njl., Kunye namawaka otyelelo, kuye kufike ixesha laxa izimvo zihlala zinento enye kwaye imibuzo efanayo ibuzwa kaninzi. Xa inani lamagqabantshintshi lifikelela kwinani elibonakalayo, undwendwelo lwakho aluyi kufunda oko ukubhalileyo kwamanye amagqabaza angamakhulu angaphambili, baya kushiya umbuzo wabo ngokongeza enye inkcazo ukuphela koluhlu kwaye balinde impendulo. Awunakho ukuphendula imibuzo efanayo kaninzi, kodwa ukuba uyishiya ingaphendulwanga, naluphi na utyelelo oluzayo lunokucinga ukuba indawo yakho ayinzulu okanye awuyi kulufumana uncedo olukhangela apho. Ingcebiso yam yile kwezi meko amagqabantshintshi kufuneka avaliwe kwaye ukugcwala kwabantu kuthunyelwe kwinqaku elitsha apho amathandabuzo axhaphakileyo asonjululwa khona. Ngale ndlela awuyi kushiya izimvo zingaphendulwanga, uya konga ixesha ekuphenduleni imibuzo efanayo kaninzi kwaye uya kuba nenqaku elitsha oza kongeza kulo amatyathanga amatsha ukuze uzibeke.
Cima izimvo: Ngaba kuvumelekile ukucima uluvo kumntu oye wazibeka engxakini? Ukuba ubeka imigaqo ngendlela yokuphawula kwaye le migaqo ayilandelwa, kuvumelekile ukuyicima. Ukuba uthi "ungabhali yonke into ngoonobumba abakhulu" kwaye ufumane uluvo KUYO YONKE KWI-CAPS, uya kuba nelungelo emhlabeni ukucima olo luvo. Nokuba uyayenza okanye awuyenzi kuya kuxhomekeka kuwe, Ukuba ubeka imigaqo, uya kulindela ukuba bayilandele Kwaye ukuba umntu ukhathazekile ngokususa uluvo olungabalandeli, kuya kufuneka aqonde ukuba iyakukhathaza nawe ukuba imithetho yakho ayilandelwa.
Into ongafanele uyenze:
Sukuzivala izimvo zakho kwizithuba ezingalandeli qhinga lokubeka indawo: Ukuba wenza iposti enje, engenzelwanga ukulwela nayiphi na ikhonkco elithile lokukhangela, kungcono ushiye izimvo zivulekile ebomini. Yimfashini ukufaka iiplagi ezivala amagqabantshintshi emva kwexesha elithile, izolo ndiphendule i-meme kwaye ndiye ndashiya amagqabantshintshi kwiphepha lakhe nabani na andinike lona ndaza ndazifumana izimvo zivaliwe Oku, ekuqondeni kwam, yimpazamo enkulu. Ukuba awukhuphisani neposi kuyo nayiphi na ikhonkco, ukhetho lwakho olululo kukuvumela ukuba londle ngomsila omde wophando olungakhuphisaniyo (Umsila omde). Ngaphandle kwesicwangciso-qhinga esithile sokuma, isikhundla sokwamkela kufuneka senziwe ukuba isithuba sikhule kangangoko kunokwenzeka, sihambisane nezimvo, ukuze yenza umhlaba olungileyo wokuzalisa uMsila omde. Ukuvala amagqabantshintshi kwezi meko kuvala iingcango kutyelelo olutsha.
Sukuzivala izimvo kwisithuba apho i-troll okanye into efanayo ihamba: Oku akunxulumene ngqo nokubekwa endaweni kodwa kuya kufuneka uyithathele ingqalelo xa usenza isigqibo sokuba uzivale na izimvo zesithuba esithile. Awulwi netrola, itrola ayihoywa. Cima amagqabantshintshi awashiyayo kwaye ungaze uphendule, kungekudala uza kudikwa kwaye alibale ngawe. Kodwa ukuba uyawavala amagqabantshintshi kwindawo apho i-troll ixhonywe khona, baya kucinga ngokungazi kwabo ukuba ubenzele yona kwaye baya kuziva benamandla. Emva koko kuyakwenzeka ukukunika i-murga kwenye inqaku okanye kuyo yonke ibhlog, ke kungcono ushiye izimvo zivulekile de kube uyadikwa. Ityala elifanayo liyenzeka xa unenqaku elicaphukisa iindwendwe zakho kwaye zikhuphe ngohlobo lwezithuko. Oku akufani neetroli, baya kushiya nje ukusikeka kwiposti yakho kwaye abasayi kubuya. Yonke imihla ndifumana izithuko ezininzi "Ungayifumana njani iPS3", Ndizifundile, ndiyazicima kwaye iphelele apho. Ndiyazi ukuba ngawaphi amaphepha azakwenzeka kuwo kwaye ke ndiyazi ukuba ngawaphi amaphepha ekufuneka ndiwajongile ukuze agcinwe ecocekile Ukuba ndiwavalile amagqabantshintshi kula maphepha, iindwendwe ezinomsindo ziya kukhangela naliphi na elinye iphepha apho zingabonisa khona uthando. Sukuzivala izimvo kumaphepha aneengxaki, ekuphela kwento oya kuyiphumeza kukudlulisela ezo ngxaki kwezinye iisayithi zebhlog.
SNdicinga ukuba kuninzi konke oku kuyakwenzeka lwakhiwo, kwabanye kuya kuba kukuphambana ukuthathela ingqalelo ezi nkcukacha kwaye abanye baya kucinga ukuba oku akunamsebenzi. Kwilizwe lokusebenza kweinjini yokukhangela, iinkcukacha zenza umahluko. Akwanelanga ukupapasha iposti kwaye uhlale phantsi komdiliya unethemba lokuba Uphando thandana nawe. Kuya kufuneka ukhangele inkosi yeinjini zokukhangela ukuba ufuna ukuba ivule umnyango ukuya kwelishumi kwaye ukufezekisa oku kufuna umgudu kunye nokuzinikezela ekusebenziseni oko ukupapashayo. Ndingavuya nomsindo Phendula izimvo zakho. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Lawula amagqabantshintshi akho kwindawo engcono
Inqaku elikhulu, iVinegar. Ngeli xesha andizanga kugxeka. 😀
Kucacile ukuba isenzi "ukumodareyitha" kuya kufuneka sisuswe kwicandelo lezimvo. Kwaye ndizibuza umbuzo. Kutheni ungameme "abafundi bakho" ukuba basebenzise amagama ofuna ukuwafumana? Ngaphandle kokusebenzisa iithegi ukuhlela amangeniso, unokongeza omnye umgca onamagama ongathanda ukuba usetyenziswe kwizimvo. Ngokuqinisekileyo abafundi abaqhelekileyo banokukuthanda ukusebenzisa xa uphendula.
Ndiyithandile indlela owohlule ngayo "umodareyitha" ekugqibeleni ... hehehe
Ndikufumanisa kunzima kakhulu ukuba abafundi bakho basebenzise amagama aphambili ukugcina uxinzelelo lwenqaku ngelixa uphawula. Kwaye nangakumbi, ukuba balandela umgaqo wokusebenzisa amagama aphambili ukwenza into oyithandayo.
Akufanele uxelele abantu ukuba ngawaphi amagama inqaku ekufuneka liphawulwe, elinokwenza ukuba ibhlog yakho ibe yinto engathandekiyo kwaye ijonge inkaba.
Ndiyakholelwa ukuba ukugcina uxinizelelo, isihloko esiphumayo kuya kufuneka sisuswe, ke oku kuya kuqinisekiswa. Kodwa kwimeko enjalo siya kuqala ukushenxisa indawo yokuzibandakanya kwiiblogi ... ke ndiyaphikisana naloo manyathelo.
Ndicinga ukuba ukuba ibhlogger inika amagqabantshintshi ngokuqulathiweyo, akukho sidingo sokukhathazeka malunga nesicwangciso sokumisa, kuba xa kubhekiswa kwinqaku umntu uyanyanzelwa ukuba abhale ngamagama aphambili njengesihogo.
Ingcebiso elungileyo kakhulu ngeviniga. Ndiza kuqwalasela ngaphezulu kwesinye sebhlog yam. Enkosi.
Iviniga elungileyo kakhulu, ndilithande kakhulu inqaku. Ndihlala ndihambisa onke amanqaku am ngendlela eqhelekileyo kwaye ihlala isebenza kum kodwa uqaphele ukuba ndinombuzo.
Ngaba injini yokukhangela ifumanisa ukuba igama eliphambili liphakathi kweethegi zohlobo o oo umzekelo ?
Inyani yile yokuba bendisebenza kakuhle mva nje ekubekweni kwiBhlog yam kodwa ukuba inokucokiswa ngakumbi emva koko…. 😉
yomelele> / yomelele>,
iziko> / iziko>,
Esinjani isisombululo esilula, zivakalise ngamagama aphambili. Sele ndimangalisiwe yiplagi okanye enye into ezenzekelayo.
Ingcebiso inomdla kakhulu, nangona ukuza kuthi ga ngoku akukho troll iye yalahla ukundwendwela indawo yam, kuphela kuphela spammer esivelela. Ngaba iiposti zam ziya kubanda kakhulu kwaye zibalwe?
UMnu Rockmantico sitsho
Inqaku elilungileyo, ndiyithandile iposti, ndifumene uninzi lweetrolls T_T rogelio ukuba ufuna ukukubulisa
Phendula Mnu Rockmantico
Ewe, iviniga uyindoda ye-laostia ngalo lonke ixesha ndingena kwiwebhusayithi yakho ndifumana izinto ezinomdla ngakumbi, inyani yeyokuba uyilayibrari eyindoda, ngethamsanqa ngezicwangciso zakho 🙂
Iiplas, iiPlas, inqaku lilungile kwaye andicingi ukuba nguMachiavellian. Ndiyavuma i-100% ngale nto uyithethayo, kodwa ngokunyaniseka, ukuyisebenzisa ngokupheleleyo kungabudla ubomi bakho .. ewe, bukhona ubomi ngaphaya kwebhlog, hahaha. Ubuncinci akunakwenzeka ukuba ndicoceke kangaka. Enkosi ngeengcebiso ngeviniga.
Inqaku eligqwesileyo ... akuninzi kakhulu ukongeza ..
Ndifuna ukukuxelela ukuba ndifikile kwaye ngayo yonke into oyibhalileyo kwaye ndafunda iikhomenti hehe ... ubuncinci ndishiye uphawu lwam ..
Nceda ungandithumeli umyalezo ukuza kuthi ga ngoku ukuba ubhalise kwi-zatoo xq ???
Ndixolele ngokuthatha ixesha lokuphendula kodwa bendixakeke kakhulu ngumsebenzi ngempelaveki.
@ Iván le uyicebisayo ayisiyombono imbi, mhlawumbi kwiforum apho wonke umntu enomdla othile iya kusebenza kakuhle, kwibhlog ndiyibona inzima ngakumbi.
I-toni1004 malunga nesihloko esichanekileyo ichanekile, ndishiye inkcazo kule post engenanto yakwenza ngaphandle kokuyicima ukuze icace gca ukuba kwenzeka ntoni apha yonke imihla. Kodwa andivumelani nento oyithethayo ukuba xa uthetha ngomxholo wenqaku iqhinga lokubeka indawo liqinisekisiwe. Ukubeka indawo (ngaphandle koMsila omde) kusekwe kwimitya ethile kwaye ezi ziphantse zingaze zibonakale kumagqabantshintshi.
@forat Zonke iithegi zinokubaluleka kwazo ekubekweni kwaye zithathelwa ingqalelo. Sebenzisa isibindi kwaye womelele ukuqaqambisa umtya.
@Rogelio inyani kukuba umxholo wesiza sakho ngowabantu abagxile kakhulu ekubhlogweni kwezihloko kunye nezinto ezinje kwaye kula macandelo kukho iitroli ezimbalwa eziqhelekileyo kwimixholo eyaziwayo (iividiyo, umculo, imidlalo, isoftware, njl.
@ Mnu Rockmantico unesisa kakhulu kuRogelio 😉
Utshaba lukawonkewonke ulungile ukuba ukusebenzisa zonke iikhonsepthi kuthatha ixesha elide. Ngumbandela womzamo kunye nokuzinikela, ukuba ufuna ukwenza imali ngale nto uyazisebenzisa zonke kwaye ukuba awunawo amaxesha ngamaxesha njengesalathiso.
@luigix, @ Xperimento1 kunye @Neri enkosi ngokufunda umhlathi kwaye uphawule 🙂
@joubert Sebenzisa i-injini yokukhangela engentla kunye nezimvo kwindawo efanelekileyo.
Imibuliso yeVinegary kubo bonke.
NGOKUGQWESILEYO ELI NQAKU ...
Andithandabuzi xa kufikwa kumagqabaza ...
Ingcebiso yakho iyaxatyiswa ...
Siyavuyisana nesiza! ...
Enkosi lol, ndiyavuya ukuba luncedo. Umbuliso omuncu.
Inqaku elihle, kulula kakhulu ukuliqonda: kubo bonke abaphulaphuli.
Ndiza kuhlala ndibatyelela. Enkosi.
Umbuliso womdiliya Ubuninzi33 😉
Kuphela ziibhlog ze-SEO ezinje, kunye nabaphawuli be-SEO abanolwazi lokuthetha, abanokubeka amagama aphambili kwizimvo. Kwezinye iiblogi ezinabahlomli balo naluphi na uhlobo kwaye abangenalo noluvo lincinci loku, akunakwenzeka ukuba banike izimvo ezinjalo. Kungenxa yoko le nto uyichaza kakuhle eposini: Ukuba abayenzi, yenze ngokwakho.
Umzekelo: Ukuyithetha le nto khange kufuneke ndikhankanye naliphi na igama eliphambili kwaye andiboni ukuba ndenze njani nokuba bendifuna, ke inkululeko yokuthetha yile, inkululeko.
Iintengiso ze-Facebook: Enye intengiso ye-Intanethi, Icandelo II